Road to republic: Barbados inosarudza mutungamiri wayo wekutanga
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bharabhasi Kuputsa Nhau » Road to republic: Barbados inosarudza mutungamiri wayo wekutanga
Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Dame Sandra Mason, iyezvino gavhuna-general, akasarudza wekutanga-kuve Mutungamiriri weBarbados.
Kufamba uku kunoita kuti Barbados, nyika diki iri kusimukira, ive mutambi wepamutemo mune zvematongerwo enyika, asi inogona zvakare kushanda se "kubatanidza uye kuda nyika" iyo inogona kubatsira hutungamiriri hwayo hwazvino pamba.
Dame Sandra Mason, iyezvino gavhuna-general, akasarudzwa wekutanga-kuve Mutungamiriri weBarbados.
Kufona kwehutongi hweBarbados huzere uye hutungamiriri hwekumusha hwakwira mumakore apfuura.
Mason ichaitwa mhiko munaNovember 30, nyika makore makumi mashanu nemashanu yekuzvimirira kubva kuUK.
Mune danho rekutora danho rekuburitsa chitsuwa cheCaribbean chitsuwa chekoloni, yaimbova British koloni ye Barbados ichatsiva Elizabeth II, Mambokadzi weUnited Kingdom nedzimwe nyika gumi neshanu dzeCommonwealth, neMutungamiriri achangosarudzwa semusoro wenyika, uye ave republic.
Dame Sandra Mason, gavhuna mukuru wazvino, akasarudzwa kunonoka neChitatu nezvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevhoti yemusangano wekubatana weImba yeParamende neSeneti, chiitiko chakakosha, hurumende yakati muchirevo, munzira yayo ".
Yaimbova koloni yeBritain yakawana rusununguko kubva ku United Kingdom muna 1966, nyika isingasviki mazana matatu ezviuru yakanga yagara kwenguva refu ichibatana nehumambo hweBritain. Asi kudaidzira hutongi hwakazara uye hutungamiriri hwekumba hwakwira mumakore apfuura.
Mason, makore makumi manomwe nemaviri, achatoresa mhiko musi waNovember 72, inova makore makumi mashanu nemashanu nyika yasununguka kubva kuna United Kingdom. Aimbova mutongi uye anga ari gavhuna-mukuru wechitsuwa ichi kubvira 2018, aive zvakare mukadzi wekutanga kushanda paBarbados Court of Appeals.
Barbados Prime Minister Mia Mottley akadana kusarudzwa kwemutungamiriri wenyika "inguva yekupedzisira" murwendo rwenyika.
Mottley akati danho renyika rekuva republic raisave kushora zvakapfuura zveBritain.
Sarudzo dzinogona kubatsira maBarbados kumba nekune dzimwe nyika.
Kufamba kunoita Barbados, nyika diki iri kusimukira, mutambi anoshanda zviri pamutemo mune zvematongerwo enyika, asi inogona zvakare kushanda se "kubatanidza uye kuda nyika" iyo inogona kubatsira hutungamiriri hwayo hwazvino pamba.
Barbados yainzi neBritish muna 1625. Dzimwe nguva inonzi "Little England" nekuda kwekuvimbika kwetsika dzeBritain.
Iyo inozivikanwa nzvimbo yevashanyi; pamberi penjodzi ye COVID-19, vanopfuura mamirioni evashanyi vakashanyira mahombekombe ayo akanaka nemvura yakajeka yegirazi gore rega.